အပျိုစစ် မစစ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံတမ်းများ | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး အပျိုစစ် မစစ်သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံတမ်းများ
ယောင်္ကျားလေးတွေ လူပျိုဖော်ဝင်ခါစ လိင်မှုကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားတတ်လာကတည်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပျိုစစ်မစစ် ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုပြီး ရင်းနှီးတဲ့ အကိုအရွယ်၊ ဦးလေးအရွယ်တွေကို တိတ်တိတ်လေးမေးတတ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘာမှမသိသေးတဲ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကောင်လေးဆီမှာ အနီးဝန်းကျင်မှာ ဆရာလုပ်ကြတဲ့လိင်ဂုရုတွေရဲ့ ယုံတမ်းတွေကိုသာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သိမှတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီယုံတမ်းတွေကို သိလိုရာမေးကမှန်ကန်တဲ့ရှုထောင့်မှ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
(၁) အမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုကြည့်ရင် အပျိုအမြှေးပါးကိုမြင်ရတယ်…
အပျိုအမြှေးပါးဆိုတာကို အပြာကားတွေထဲမှာလည်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ တကယ့်လက်တွေ့မှာလည်း လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိသေးတဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ရဲ့ယောနိမှာ အပျိုအမြှေးပါးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းအမြှေးပါး ကပါးလွှာလွန်းတဲ့အတွက် စက်ဘီးစီးရင်း၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း၊ ချော်လဲကျရင်းနဲ့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိဘဲ ပေါက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောနိထဲမှာရှိတဲ့ အမြှေးပါးကိုရှာပြီး အပျိုမစစ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်တာမှားပါတယ်။
(၂) ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံရင်သွေးထွက်ပြီး အရမ်းနာတတ်တယ်…
လုံးဝကိုမှားနေတဲ့ ယုံတမ်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားက အမျိုးသားတွေကြားထဲမှာ ပိုရေပန်းစားပြီး အပျိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ယောနိက သွေးထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို အမြစ်ဆွဲစေပါတယ်။ ယောနိကသွေးထွက်တယ် မထွက်ဘူးဆိုတာက အပျိုစစ်မစစ်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြင်းမတူညီလို့ တချို့ကသွေးထွက်ပေမယ့် တချို့ကသွေးမထွက်ပါဘူး။ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံလို့ နာကျင်တယ်ဆိုတာကတော့ ဆက်ဆံဖော်အမျိုးသားရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီး သဘာဝချောဆီထွက်တာနည်းနေသေးခြင်း၊ အပျိုအမြှေးပါး ကောင်းစွာဆန့်ထုတ်မှုမရှိသေးခြင်းတို့ကြောင့်လည်း လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ နာကျင်တတ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့တင်ပါးကပြားနေတယ်တာကိုတွေ့တာနဲ့ ဗန်းစကားနဲ့ပြောရင် ဒီကောင်မလေးက အစားခံရတာများနေပြီလို့ သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ တင်ပါးကိတ်လွန်းနေရင်လည်း လေးဖက်ထောက်ပုံစံနဲ့လိင်ဆက်ဆံခံရတာများလို့ တင်ပါးကြီးလာတာလို့ မတူညီတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်။ ယင်းကဲ့သို့တွေးထင်ပြောဆိုခြင်းက မမှန်သလို သူများသားသမီးကိုစော်ကားရာရောက်တယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အမှန်တရားက တင်ပါးပြားတယ်၊ ကြီးတယ်ဆိုတာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကားလွန်းနေရင် အပျိုမစစ်ဘူး…
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကားမကား သင်ဘာနဲ့တိုင်းတာတာလဲ အရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ခြေထောက်ကားနေတဲ့အမျိုးသားကိုရော သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ? အပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲ လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲလွဲမှုအများကြီး ရှိကြတာဖြစ်လို့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကားတာကိုကြည့်ပြီး အပျိုမစစ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ဦးမှာလား ?
လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ယောနိကျယ်သွားရအောင် ယောနိက တစ်ခါသုံးပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ သရေကွင်းတွေတောင် ဆွဲဆန့်ပြီးပြန်လွတ်လိုက်ရင် နဂိုမူလပုံစံကိုပြန်ရောက်တာဆိုရင် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ ယောနိက ၎င်းတီထွင်မှုထက်အများကြီးပိုသာလွန်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ သဘာဝအတိုင်းကလေးမွေးဖွားခြင်းကြောင့်သာ ယောနိကျယ်တတ်ပါတယ်။
ယောနိထဲလက်နှစ်ချောင်းထည့်ကြည့်လို့ ဝင်သွားတယ်ဆိုရင် အပျိုမစစ်ဘူးဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီအချက်ကိုသေချာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ယောနိထဲလက်နှစ်ချောင်းမထည့်ခင် အဆိုပါအမျိုးသမီးက သဘာဝချောဆီလုံလောက်စွာထွက်နေခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝချောဆီထွက်သင့်သလောက် မထွက်တဲ့အခါ အပျိုမဟုတ်တဲ့လူကို လိင်ဆက်ဆံရင်တောင် လိင်တံအထုတ်အသွင်းကျပ်မှာဖြစ်ပြီး လိင်ဆက်ဆံခံတဲ့ အမျိုးသမီးမှာလည်း နာကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပျိုစစ်ကြောင်းလက်နှစ်ချောင်းက မဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပျိုစစ်ခြင်းကို ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူရည်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူစိမ်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်လို့မရသလို အထက်ပါယုံတမ်းများကိုလည်း မမှတ်ထားကြဖို့ လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အပျိုစင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံတမ်းတွေကို အောက်ပါလင်ခ့်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။